Maqaal: AMAKAAK WAAYE UGAAS DAGAAL KA ABAABULAYO ARLO UUSAN EHEL U AHAYN!! – idalenews.com
Waxaa si aad ah u sii kululaanaya xiisadaha colaadeed ee u dhaxeeya dadka deegaanka Gobalka Shabeelaha Hoose & dadyow kale oo iyaga marti ku ah deegaankaasi oo u arka in ay iyaga yihiin deegaan ama sheegta lahaanshaha gobolka Shabeelaha Hoose
Soomaalidu waxa ay tiraahdaa (Baadi kugu raagtey xalaashaada ama xoolahaadaad moodaaa). Dadkaan sida aad ka ah u kacsan isla markaasna ujeedkooddu yahay in ay xoog & dagaal kaga nacfiyaan qeeyraadka balaaran ee dhulka Sh/Hoose, ayaa la ogsoon yahay in sanadihii 1993 illaa 2005 ay baad & gumeeysi dadban kula kaceen beeraleyda iyo dadka deegaanka gobolka shabeelladda Hoose.
Dadkaan hadda isku ku howlan in ay xoog markale ku maquuniyaan dadka sh/hoose waxayba moog yihiin in derisnimo deegaanka loo dejiyay balse taas bedelkeeda sheegaan in ay deegaanka ehel u yihiin, waxaaba ka sii daran markii Ugaaskoodda uu iclaamiyay in ay diyaar u yihiin dagaal in ay la galaan dadka leh deegaanka Sh/hoose.
Waxaan u malaynaa in aysan jirin cid moog in dadka u dhashay sh/hoose laga gadi jiray biyaha webiga beerahoodana xoog lagu haystay, gabdhahoodana awood lagu guursan jiray, markii wiil u dhashana qof kasoo jeedda Sh/hoose lacag laga qaadi jiray. Ragaan is abaabulaya oo jeclaystay in ay deegaanadaasi barwaaqada illaahay ugu deeqay in ay la wareegaan waxa ay isku bahaysteen qaabab badan iyagoo dagaalka ka wada dhankasta iyagoo ujeedkooda rasmiga ah yahay in ay wali baaqi kusii ahaadaan deegaanada sh/hoose ee ay martidda ku yihiin, waxaa jira rag iyaga ka mid ah oo media-yaha ka dagaalama oo dadka deegaanka u addeegaya oo ka shaqeeya hay’addaha samafalka been & bar bagaando ka sheega.
Waxaan aad uga xumahay in rag caado qaatayaal ah oo deegaanka u dhashay oo iyaga gacan siiya ragan oo daba dhilif u ah.
Bal ka waran Ugaas kasoo jeedda sh/hoose haduu ku dhawaaqo dagaal in lagu qaado Guri Ceel sidee loo arki lahaa?? Aqristoo illaah baan kugu dhaarshee ma jiraa nin kasoo jeedda Sh/hoose oo Guri Ceel awood ku sheegan kara?…….. waxaan u malaynaa cid haa dhihi karta inaysan jirin.
Arintaan hadii ay sii socoto waxaa dhici karta in dhamaan dadka u dhashay Sh/hoose ay meel qura uga soo wada jeestaan oo ay cadowga raba in dhulkooda barwaaqada la wareego si toosa ah isaga dhiciyaan, maanta ma ahan markii madaxa looga istaagi jiray dadka Sh/hoose waa ay caqliyeysteen waa ay awoodeysteen waxa ayna diyaar u yihiin sifo kasto oo caddowga duullaanka ah isaga meel marin lahayen.
Waxaan aad uga xumahay in dowlada federaalka oo sheeganaysa federal hadana aan soo fara galineynin arintan qatarta ee soo cusboonaatay waayahan danbe.
Dhanka kale raga iyagana saxaafada ka caytama waan wada naqaanaa waa dad wada dhiigyi cab wada ah oo afka u dhigan jiray waxkasta oo loogu talla gallay Gobolka sh/hoose iyaga oo mashaariicyadda ay hay addaha kasoo qaataan dano gaar ah kufulin jiray.
Run ahaantii dadka sh/hoose ma diidana in lala dego deegaanka balse waxa ay kasoo horjeeddaan in loogu taliyo deegankoodda oo dadmarti ay u taliyaan qeyraadkoodana si xoog looga macaasho.
Ugu danbeyntii waxa aan ku baaqaynaa in dowllada sida ugu dhaqsiyaha badan ay kusoo fara galiso arintan isa siitaraysa.
W/D Caadil Suleymaan Aweys